Iinqanaba ezi-5 ezona zihamba phambili kwiiNtaba zeSizwe zeJoshuwa
Ukunyuka kwiJashua National Park kuya kuphilisa umntu onokungaqondi kakuhle ukuba intlango iyindawo engabhaliyo, engenakuphila. Ikhethwe njengesikhumbuzo sesizwe ngowe-1936 kwaye ithuthukiswe kwisimo sepaki kazwelonke ngo-1994, uJoshuwa umthi uhlanganisa iihektare ezingaba ngu-800 000 zeendawo ezahlukileyo, malunga neyure ukusuka ePalm Springs, eCalifornia.
Akumangalisi ukuba ipaki iyaziwa ngokuba yimbozi yayo, imithi ebizwa ngokuthi imithi, iigodo zayo eziguguzelayo kunye nefomtyural fomu zongeza umgangatho wehlabathi kwiJas Tree landscape.
Imithi, ilungu leentsapho ze-yucca, inokuveza iimpawu ezintle zezimbali eziqhambileyo ukusuka ekupheleni kweKwindla, ngokuxhomekeka ngexesha kunye nenani lemvula epakini.
Ixesha Eligqibeleleyo lokunyuka kwi-National Park kaJoshuwa
UJoshuwa umthi ukhona kwindawo yenguqu phakathi kweentlango ezimbini ezahlukeneyo. Ngokuphakama okuvela kwii-900 ukuya kwii-5,000, i-park iquka i-Mojave kunye ne-Colorado yoluntu. Ukuhluka kobuninzi beendlela ezibonisa ukuba izibonakaliso zentyatyambo ziyaqalisa ukususela ngasekupheleni kukaFebruwari kumacandelo aphakamileyo aphezulu kwaye ziqhubekele ekupheleni kwentwasahlobo kwimimandla eninzi yeepaki.
Ipaki nayo inokumangalisa kwezulu. Kufuneka ulungele ukuba kubanda ebusika xa kunokwenzeka ikhephu kunye neqondo lokushisa. Kodwa ulindele ukushisa kwezulu kunye neendwangu zokuduma kwelanga ehlotyeni xa amaqondo okushisa aqheleke ngaphezu kwama-degrees ayi-100. Imvula yamanzi ehlobo iyakubangela ukukhukula kwamanzi .
Iipaki ze-monzogranite zamatye ezahlukileyo zidibanisa kunye no-Joshua Trees ukudala indawo eneengqungquthela egcwele imilo ekhethekileyo. Amatye ayenze uYoshuwa Tree, athiwa yi-J-Tree okanye ngamanye ama-JT nje, indawo ephakamileyo yokunyuka kwamatye .
Ukuthetha ngamatye, uJoshuwa Tree unembali ekhethekileyo yomculo.
Emuva ngemini, ukuthandwa nguKeith Richards kunye ne-Gram Parsons kwaphuma epakini ngenxa yokuzonwabisa okwandisa ingqondo kunye nokutshekisha isibhakabhaka se-UFOs. Kwaye ndibulela i-U2 ye-albhamu ephawulekayo "U-Joshua Tree," ipaki yafumana umlinganiselo owongezelelweyo wenkcubeko ye-pop-nangona ikhonkco idutshulwa kwenye indawo kwiMojave.
Eyona ndawo iHlabathi yeSizwe yeSizwe iJoshua
Nazi ezintlanu ezihamba phambili zemihla ngemihla yamaJoshuwa ezibonisa ukuhlukahluka kwepaki kunye nobuhle.
49 Iiplanga ze-Oasis
Uhambo olujikelezayo lwee-3-mayela luqala ngaphakathi ngaphakathi kumda wepaki kumntla ekupheleni kweCanyon Road kwi-Highway State 62. Uhambo lukhuphuka malunga neekhilomitha ezingama-350 kwaye lukhokela entlango enqabileyo ukuya kwi-oasis encinci kodwa emangalisa yeentaba zase-California. Ngenxa yokusondela kwe-oasis kwiindawo ezinabantu abaninzi, iintendelezo ziye zahlushwa iintlobo ezahlukeneyo zentlonelo - ukusuka kwigraffiti eqingqiweyo ukuya kutsho. Kodwa, ingakumbi ukuba ixesha lakho lilinganiselwe kwaye uceba ukuba yinxalenye ephambili yepaki, le myuko yithuba lakho elihle lokutyelela i-oasis yesundu.
IBarker Dam Nature Trail
Ukubheja okulungileyo xa uhamba nezingane, i-loop elula kunye ne-flat-mile-lole inikezela ngamehlo kwinqanaba le-Wonderland of Rocks, kunye neyona nxalenye yembali yepaki. Idama yayikwakhiwa yinkomo yeenkomo ekuqaleni kwee-1900 kwaye ngoku ihlinzeka ngemithombo yamanzi kwiindidi zezilwanyana zasendle, kuquka neenkomo ezinkulu zegusha.
Umzila uqala kumgwaqo wePark Boulevard loop kufuphi neHidden Valley Campground malunga neekhilomitha ezingama-10 kumzantsi-mpuma kwesikhululo sokungena kwipaki esentshonalanga.
Iipasorama eziyingozi zentliziyo yepaki yenza le minyango ibe yindlela enkulu xa ulungele ukunyuka. Kuphela uhambo olungama-3-mile uhambo olujikelezayo kodwa uza kunyuka ngaphezu kwe-1 000 ukuya kwi-summit 5,458-foot. I ntlawulo? Ukubukeka okukhulu kwiiplanti ezibanzi zepaki kunye nokwakheka kwamadwala, kunye neembono ezibonakalayo ezicacileyo zeNtaba iSan Jacinto kunye ne-11,503-foot foot yaseSan Gorgonio Intaba - iindawo eziphakamileyo ezimbini zase-California. Intloko yomzila ivela kwinqanaba le-Park Boulevard loop malunga neekhilomitha ezili-16 ukusuka kwiziko lezivakashi le-Yoshuwa Tree kunye neekhilomitha ezili-18 ukusuka kwiziko lezivakashi lase-Oasis.
Umzila weSwing Scout ukuya kuWillow Hole
Uhambo olujikelezayo lwee-kilomitha ezingama-6 lukhokelela kwiJoshua enomthi wasemahlathini esihlahleni kunye neengqungquthela ezibucayi kunye neengqungquthela zamatye eWonderland of Rocks.
Umzila uqala kwi-Keys View iBhodi yokuBuka emva kweeNkcazo kwaye uhamba nge-intanethi evulekile evulekileyo malunga neekhilomitha ezili-1 ukuya kwee-2 ukuya kufinyelela kwidibaniso. Yiya ekunene kwaye umzila ukhokelela kwiindawo ezinokwakheka kwamatye kunye noluhlu lwe-Wonderland of Rocks.
Umzila unakho ukudideka kwaye ukubethelwa kwakho kukugqithisela ukulandela nje iziprints. Njengoko igama layo libonisa, iWillow Hole yindawo enomileyo eneemivumba kunye nedonki elibekwa phakathi kwamatye. Inwele ye-trail i malunga neekhilomitha ezili-11 ukuya kwe-mpuma kumzantsi-dolophu yedolophu kaJoshuwa umthi kunye ne-Park Boulevard loop.
Ilahleko zePlastiki yeOasis
Kutholakala ekhoneni elikude lepaki elikude lepaki, ukunyuka kohambo lokujikeleza ngee-7.2-miyela ngowomnye kaJoshuwa umthi ogqwesileyo. Umzila uqala kufuphi neCenttonwood Visitor Centre kwaye uhamba ngeentlango ezivulekileyo, ezivulekile kunye neembonkqo ngeengcamango ezigqithisileyo endleleni eya kwihlathi elikhulu elikhulu lemithi yesundu.
I-oasis ihleli kwi-canyon eyimfihlo kwaye iyindawo efanelekileyo yokuhlala phezu kwepikiniki. Inwele yomzila ivela kwiCottonwood Springs Road ukusuka kwi-Interstate 10 kwaye ifikeleleke ngokulula kwiindawo zokungcebeleka ePalm Springs naseCachelhel Valley. Kuthe malunga neekhilomitha ezingama-40 ukusuka kwiziko leeNkokeli zee-Oasis kunye neekhilomitha ezili-60 ukusuka kwiziko leZiko leMvakalisi likaJoshuwa kodwa wenza indawo epheleleyo xa uceba kwi-drive yonke indlela epakini.
Uzama ukuzama njani ukuhamba ngeebhola kunye neenqunu
Uhambo olukhuselekileyo kwiMozulu
Izintaba 101: Indlela yokubeka kwiGaiti
I-Regis University Admissions Facts
Ted Kennedy kunye ne-Chappaquiddick Accident
Isexwayiso sama-Miranda kunye namalungelo akho
Ukuhlalutya ngokujulile 'uSonny's Blues' nguJames Baldwin
Ukwahlukana phakathi kobuQala kunye ne-Acronym
I-Back Back and Musclebacks
IBhayibhile, uLuhlu loLuhlu okanye iMisebenzi ekhankanyiweyo?
8 Imisebenzi yokuPrinta kwiMartin Luther King Day
UDkt. Vinay Goyal kunye neengcebiso zokuthintela ukukhusela iiFlu
Iintlobo ezi-5 ezintle kunye neengcamango ezingalunganga malunga nama-Conservatives
Idwala lokunyuka kubantu abanoyikwesaba
Iimidlalo eziPhambili zePolimpiki zoLwandle
Izidumbane ze-Dung kunye ne-Tumblebugs, i-Subfamily Scarabaeinae
UDkt. Mae C. Jemison: uAstronaut kunye noMboniso
Isikhokelo Sokunyathela Ngezinyathelo Ukwenza Yakho Imfutho Eluhlaza